သက်ငယ်မုဒိမ်းတရားခံများကို ယီမင်နိုင်ငံတွင် မည်သို့စီရင်ပါသလဲ ?
01/07/2019 mayoo 0
သက်ငယ်မုဒိမ်းတရားခံများကို ယီမင်နိုင်ငံတွင် မည်သို့စီရင်ပါသလဲ ? ပြီးခဲ့သော ၂၀၁၇ သြဂုတ်လ ၃၁ ( တနင်္လာနေ့ ) တွင် ယီမင်နိုင်ငံ၊ တာဟီယာမြို့လယ်ရှိ လူစည်ကားရာအရပ်တွင် လူတစ်ယောက်ကို သေနတ်ဖြင့်သုံးချက်တိတိပစ်ခတ်ကွပ်မျက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ထိုဖြစ်ရပ်အပေါ် တစ်ကမ္ဘာလုံးက တုန်လှုပ်ခဲ့သည်။ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံရသူမှာ ဟူစိန် အယ်လ် ဆာကိရ် Continuous reading
01/07/2019 lin htet 0
သင် တို့ လုံး ၀ မ သိ သေး သော ကမ္ဘာ တစ် လွှား မှ ဗုဒ္ဓ ခြေ တော် ရာ ချ ခဲ့ သည့် နေ ရာ ( ၁၀ ) နေ Continuous reading
ထိုင်ခုံတွေအစား အိပ်ရာတွေ ပါဝင်တဲ့ VIP ရုပ်ရှင်ရုံသစ်ကို ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ။
ထိုင်ခုံတွေအစား အိပ်ရာတွေ ပါဝင်တဲ့ VIP ရုပ်ရှင်ရုံသစ်ကို ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ။ ပုံမှန်ဆိုရင် ရုပ်ရှင်ရုံ တွေမှာ ထိုင်ခုံတွေကိုပဲ ထည့်သွင်း လေ့ရှိတာပါ။ ပိုမိုအဆင့်မြင့် ဇိမ်ကျတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံမျိုး ဆိုရင်တောင် လုံးဝ ဇိမ်ကျတဲ့ ထိုင်ခုံ မျိုးတွေနဲ့ ခြေထောက်တင်စရာ နေရာ စီစဉ်ပေးထားတာမျိုးပါပဲ။ Continuous reading
အင်တာနက်မသုံးဘဲ ငွေဖြတ်ခံနေရပါသလား… ၊ မဖြစ်အောင် ဒါတွေလုပ်ပါ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးပြု သူတွေ အင်တာနက် ဘယ်လိုသုံးလိုက် တယ်။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု နှုန်းထား ကို တိကျစွာ သိရှိဖို့အပြင် အင်တာနက် သုံးစွဲချိန်တိုင်းမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု ပမာဏများအ တွင်းမှ ဒေတာများလျော့နည်းသွားခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးမပြုပေမဲ့ ဖုန်းဘီလ်တွေ Continuous reading
တစ်နေ့လျှင် ၇ နာရီထက်ပိုပြီး ဖုန်း ၊ တက်ဘလက် အသုံးပြုသော ကလေးငယ်များရင်ဆိုင်ရမယ့် ဆိုးကျိုးများ – တစ်နေ့ကို ၇ နာရီထက်ပိုပြီး ဖုန်းကြည့်သော ကလေးငယ်များ သင့်အနီးအနားတွင် ရှိနိုင်ပါတယ် ။ နေ့စဉ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုများခြင်းဖြင့် ကလေးငယ်များရဲ့ ဦးနှောက် ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်လာပြီး နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် အိုင်ကြူနိမ့်ခြင်း ၊ Continuous reading
မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတင် ပေါက်သွားခဲ့တဲ့ ရဲရင့်အောင်ရဲ့ “စိတ်ရှည်သည်းခံ” သီချင်းအသစ်
မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတင် ပေါက်သွားခဲ့တဲ့ ရဲရင့်အောင်ရဲ့ “စိတ်ရှည်သည်းခံ” သီချင်းအသစ် လူငယ်ကြိုက်တေးသံရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရဲရင့်အောင်ကတော့ ဂီတလောကမှာတော့ အောင်မြင်မှုတွေ များစွာ ဆွတ်ခူးရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ …။ ရဲရင့်အောင်က လက်ရှိမှာလည်း အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် သီချင်းကောင်းလေးတွေကိုလည်း အမြဲတမ်း ဖန်တီးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ရဲရင့်အောင်ရဲ့ သီချင်းတွေကလည်း Continuous reading
ရာသီအပြောင်းအလဲမှာ သင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ အလှအပအတွက် သတိထားရမယ့် အရာများ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း ရာသီဥတုတွေ ပြောင်းလဲ လာတာနဲ့အမျှ သင့်ရဲ့ အသားအရေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်း လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲ နေပါတယ်။ အရေပြားဟာ အထိခိုက် မခံဆုံးဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီလိုရာသီဥတု အပြောင်းအလဲဒဏ်ကို အခံရဆုံးပါပဲ။ ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီမှာ Continuous reading
ပရိသတ်တွေ အရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေကို အခွေထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ စိုးသူ
ပရိသတ်တွေ အရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေကို အခွေထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ စိုးသူ စိုးသူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာ ကတည်းက အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော် မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကို ရရှိထားတဲ့ မင်းသားကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စိုးသူက နိုင်ငံခြားမှာ နှစ်ရှည်လများ သွားရောက် နေထိုင်ခဲ့ပြီး မကြာသေးမီနှစ်အနည်းငယ်ကမှ Continuous reading
ဘော်ဒီဂတ်နှစ်ယောက်ငှါးထားရတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည် အခုလက်ရှိ အချိန် လူမှု ကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေပန်းစားနေကာ တချို့ ကတော့ သူဘက်က ရပ်တည်တယ် တချို့ကတော့ ဝေဖန် ဆဲရေ တိုင်းထွာခြင်း တွေကို ခံနေရတဲ့ မီးသတ်နဲ့ နောက်ဆုံး ပြဿနာတတ် ထားတဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန် ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်ကတော့ လက်ရှိမှ Continuous reading
မန္တလေး မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကြီးက ရှေးဟောင်းကြေးရုပ်ကြီးတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်း မ ဟာ မု နိ ဘု ရား ပ ရ ဝဏ် ရှိ ကြေး ရုပ် ကြီး များ သည် မြန် မာ နိုင် ငံ၊ မ Continuous reading